Iiraan oo Sheegtey Tirada dhimashada askarta Mareykan iyo inka badan 100 bartilmaameed oo kale – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iiraan oo Sheegtey Tirada dhimashada askarta Mareykan iyo inka badan 100 bartilmaameed...
Iiraan oo Sheegtey Tirada dhimashada askarta Mareykan iyo inka badan 100 bartilmaameed oo kale
Telefishanka dawladda Iiraan ayaa shaaciyay maanta, Arbacada, in ugu yaraan 80 askari oo Mareykan ah lagu dilay weerarka gantaalaha Iiraan ee lagu qaaday laba saldhig oo ay ku jiraan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq. Telefishanka ayaa soo xigtay ilaha ilaalada kacaanka isagoo sheegay in Iran ay isha ku hayso 100 kale oo bartilmaameed ah oo gobolka ah haddii Washington ay qaado wax jawaab ah.
Ilo wareedyo Iiraan ayaa tilmaamaya in gantaal Iiraan aan la soo qaban, lana xaqiijiyay in “khasaare ba’an” uu ku dhacay helikabtarro Mareykan ah iyo qalab militari oo ku sugnaa saldhiga Ain Al-Asad ee kuyaala Anbar, galbeedka Ciraaq.
Ilaalada Kacaanka Iran ayaa ku dhawaaqay waaberigii maanta bartilmaameedka bartilmaameedka saldhiga Ain al-Assad, oo ay ku jiraan askar Mareykan ah oo ku sugan gobolka Ciraaq ee Anbar, oo ku garaacdey dhowr iyo toban gantaal oo dusha sare ah, isla mar ahaantaana loogu hanjabay inay weerarayaan Haifa iyo Dubai haddii Washington ay aargudato militeri ku dhawaaqdo.
Dhanka kale, Pentagon-ka ayaa sheegay in gantaalka gantaal lala beegsaday saldhigyada Ein al-Assad iyo Erbil.
Pentagon-ka wuxuu tilmaamay in Iiraan ay gantaalo in kabadan 12 gantaal oo ballistic ah ku weerartey laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka.
Telefishanka Iiraan ayaa baahiyay in gantaalkan loo fuliyay aargudasho dilkii taliyihii ciidamada Qudus Qassem Soleimani oo lagu dilay weerar Mareykanku ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha Baghdad jimcihii la soo dhaafay.
Ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa yiri, “Ciidamada cirka waxay sameeyeen howl guul leh iyagoo wata magaca shahiid Soleimani, ayagoo dhowr iyo toban gantaal oo dusha sare dusha sare ka qaadaya saldhigga cirka ee loo yaqaan Ain al-Assad.”
Wuxuu intaas ku daray in gantaallo ballistic la adeegsaday “Qayyim, iyo “Zulfiqar” masaafo dhan 800 oo kilomitir oo loogu talagalay in lagu garaaco saldhigyada Mareykanka.
Wakaaladda wararka Iran Fars ayaa daabacday muuqaal muujinaya daqiiqadihii ugu horreeyay ee gantaalka lagu garaacay saldhigyada Ein al-Assad iyo Erbil.